Pakistan: Horohorontany tany Baluchistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2019 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny اردو, বাংলা, English
Baithak nanamarika fa:
Pishin, Ziarat, Qila Abdullah, Chaman, Loralai, Sibbi, Mastung no faritra tena voa mafy. Araka ny fanadihadiana ara-jeolojika tao Pakistana, tany amin'ireo tendrombohitra Chiltan no foiben'ny horohorontany. Ziarat no faritra tena voakasika mafy.
Raha vantany vao namely ny faritra ny horohorontany, dia natsangana ny pejy Wiki, izay notantanin'ilay bilaogera malaza iFaqeer ao amin'ny Wiki Pakistan. Azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny CARE ny sarintany misy ny faritra voakasika.
Ity ny lahatsary misy ny horohorontany nampidirin'i pakirajput tao amin'ny Youtube:
Pakistaniat nanomboka tamin'ny lahatsoratra mampatahotra mizara ny zava-misy tamin'ny loza:
Milaza ny manampahefana fa nisy hovitrovitra roa, nihovitra teo amin'ny 04:09 ora ary avy eo tamin'ny 05:10 PST narahana fiverenana telo farafahakeliny.
Adnan nizara ny ahiahiny:
Tsy dia tsara ara-bola ny zava-drehetra tamin'ny volana oktobra 2005 saingy ambony ny fanantenana ary ho resy ity loza ity miaraka amin'i Insha Allah sy ny fanampian'ny (namana) Pakistaney. Afaka manantena aho fa ny antoko politika rehetra, ny mpisolovava, ny tafika dia samy hiala amin'ny disadisany manokana ary ho vonona hanampy ireo niharan-doza. Hanampy antsika anie i Allah ary hahatonga antsika hanampy ny hafa
Changing up Pakistan nizara fanehoan-kevitra:
Mbola nisy loza hafa nitranga androany, tao anatin'ny ririnina henjana tamin'ity indray mitoraka ity. Nilaza tamin'ny AFP i Mohammed Hashim, mponina ao Wam, iray amin'ireo tanàna voa mafy indrindra hoe: “Rava izahay … Tsy manana na inona na inona tavela izahay mba hamonjena ny fianakavianay amin'ny hatsiaka amin'ny alina.” [..] Maro tamin'ireo mponina no nandany “andro nikaroka ireo havan-tiana na nandevina ireo maty tamin'ny fasana faobe, namely ny tanàna ny fiverenan'ny horohorontany izay saika goavana noho ny horohorontany tany am-boalohany, ka namoaka ireo vato hiparitaka amin'ireo tendro mpifanolo-bodirindrina sy niteraka tahotra vaovao indray.”
Lahore Metblogs nilaza momba ny fiverenan'ny horohorontany tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ny hatezeran'ny natiora nandoto ny volana Oktobra tamin'ny rà indray:
Natomboka ny ezaka fanavotana mba hamonjena olona marobe araka izay atao tao ambanin'ny korontam-bato sy fihotsahan'ny tany miaraka amin'ny tafika Pakistana mitarika izany. Tsapa manerana an'i Quetta ny fiverenan'ny horohorontany, ary tao amin'ny lemak'i Ziarat ny foibeny, izay hita fa toerana malaza indrindra any amin'ny faritany.
Islamabad Metblogs mitantara ny antson'ny ben'ny tanànan'i Ziarat:
Misy ny fahavoazana goavana. Tsy misy na dia trano iray tsy voakasika.”
Miantso antsika ny adidintsika amin'ireo rahalahy sy anabavintsika ao Balochistan. Nanao izay azonay natao ho an'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany tamin'ny 08 Oktobra 2005 izahay ary tsy foana ny ezaka nataonay tamin'izany. Manao antso ho amin'ny firaisana indray izahay ary hampiseho firaisan-kina, hafanam-po sy fitiavana lehibe ho an'ireo rahalahintsika sy rahavavintsika miozolomana anaty fangirifiriana.
Na dia tao amin'ny bilaogiko manokana aza, dia nanasongadina ireo ezaka fanampiana roa manampy ny faritra rava aho: antso iray avy amin'ny talen'ny IDSP ary ezaka fanampiana iray hafa avy amin'ny ivom-pampianarana FAST izay niroso tamin'ny fanangonana ireo entana fanampiana FAST ny mpianatra mba handefa avy hatrany ireo entana fanampiana any amin'ny faritra.
Maro ireo ezaka azo jerena ao amin'ny pejy Wiki Pakistan Earthquake izay natsangana ho fanampiana.